ပွေ့ဖက်ခြင်းက နက်ရှိုင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားကို ဖော်ပြပါတယ်
မင်္ဂလာမဆောင်ခင် အသေးအဖွဲ ပဋိပက္ခလေးတွေ မဖြစ်ရအောင် သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်း (၅) ခု ရှိပါတယ်။ လက်ထပ်ဖို့ နှစ်ဦးသား စတင်လိုက်ကြတယ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးမှ လမ်းခွဲရတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကို မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ပဋိပက္ခလို့ စိတ်ပညာရှင်များက ခေါ်ကြတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ မင်္ဂလာဆောင် အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းက ငွေကြေး၊ ဝါသနာ စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားကြရတာကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်မှ သတို့သမီးများစွာက မင်္ဂလာဆောင်ကို လက်လွှတ်ချင်စိတ် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
1. မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်း မပြောတဲ့နေ့
အခုချိန်မှာ မင်္ဂလာဆောင်က နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ဆွေးနွေးဖို့ အလိုအပ်ဆုံး အကြောင်းအရာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ ပြောဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်လမှာ တစ်ရက် ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် ညစာအတူထွက်စားပါ၊ ကော်ဖီအတူသောက်ပါ ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ။ အဲဒီလို သွားချိန်မှာလည်း ရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းတွေ ချမှတ်ပါ။ အဲဒါကတော့ မင်္ဂလာဆောင်အစီအစဉ်အကြောင်း မပြောဖို့ပါပဲ။ ပျင်းနေရင် နောက်နှစ်မှာ နှစ်ယောက်အတူလုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို အတူတကွ စာရင်းပြုစုပါ။ ခင်ပွန်းလောင်းနဲ့ အတူ နေထိုင်နေပြီဆိုရင် အိမ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်း လုံးဝမပြောတဲ့အချိန် ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ ညစာစားချိန် ဒါမှမဟုတ် မနက်စောစောအချိန်လိုမျိုးပေါ့။
2. လန်းဆန်းတက်ကြွမှု ဖန်တီးပါ
တောင်တက်ခြင်း၊ ကမ်းခြေသွားခြင်း၊ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ ဂိမ်းတွေမှာ ပါဝင်ခြင်း၊ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ အားလပ်ရက် ဖန်တီးခြင်း၊ ညစာအတူစားခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာ ဖြစ်လို့ နှစ်ဦးသား ဒိတ်လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူးလို့ မတွေးပါနဲ့။
မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းပြောဖို့ မက်ဆေ့ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါ ချစ်တယ် ဒါမှမဟုတ် လွမ်းနေတာ စတဲ့ ကြည်နူးစရာကားလေးတွေ ပြောဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သူက ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကို ပြပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
4. လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးပါ၊ ကြီးမားတဲ့ရလဒ်ရရှိပါလိမ့်မယ်
အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုခုဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူး၊ သူ့ကို ဒီအတိုင်းပဲ လက်ဆောင်လေးတစ်ခု ဝယ်ပေးပါ။ နှစ်ယောက် အတူရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဖရိန်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ နက်ကတိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ မင်္ဂလာဆောင် အတွက် စီစဉ်နေချိန်မှာ ဒီလို အသေးအဖွဲလေးတွေက စိတ်ဖိစီးမှုကို အလျင်အမြန် လျော့နည်းစေပါတယ်။
5. ကြင်နာတဲ့ အထိအတွေ့ရှိပါ
လက်ချင်းတွဲတာ၊ နောက်ကနေ ဖက်တာ၊ နမ်းတာ၊ ခေါင်းကို သူ့ပခုံးပေါ် မှီထားတာ စတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ကြည်နူးစရာ ကောင်းတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေ ဖန်တီးပါ။ အခက်အခဲတွေကြောင့် အချစ်တွေကို မေ့လျော့မထား သင့်ပါဘူး၊ အချစ်ကြောင့်ပဲ တစ်ဘဝလုံး အတူနေချင်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလား။ အရမ်းအလုပ်များတဲ့အတွက် အထိအတွေ့အပေါ် ခံစားချက်ပျောက်ဆုံးနေတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။